काठमान्डाैँ, ३० कार्तिक । नेवारी समूदायमा आजको दिन म्हपूजा भनेर धुमधामका साथ मनाउने चलन रहेको छ, नेवारी भाषामा एक अक्षरले बनेका शब्दहरुको बाहूल्यता पाइन्छ, म्ह को शाब्दीक अर्थ चाँही देह या शरीर भन्ने बुझाउँदछ र यस अर्थमा म्ह पूजाको अर्थ आफ्नो देह प्रतिको आदर यूक्त याचना हो ।
आजको दिन आत्मतत्वलाई वोध गराउने अनि सजिवताको आभाष गराउने दिन पनि हो । नेवारी भाषामा म्हं शब्दको प्रयोग र ईतिहास केलाउँदै जाने हो भने यसको प्रयोग उपसर्ग र प्रत्ययका रुपमा ब्यापक रुपमा वोलिचालीका वाक्याशंहरुमा प्रयोग भएको पाइन्छ । जस्तै छित म्ह फुला ? अर्थात तपाईलाई सञ्चै छ ? म्ह फु अर्थात सञ्चै छ । म्ह मफु अर्थात् सञ्चो छैन ।
आज तिथि अनुसार गोवरधन पूजा परेन यद्धपि आजको दिन गाईगोरु, हलिफाली अनि अन्य कृषिजन्य औजारहरु पूजा गर्ने चलन छ । कृषिप्रधान नेपाली दैलोहरुमा हिँउदको शुरुवातसंगै वर्खायामभरि थन्काएर राखेका हलो, कुटो, कोदालो लगायतका औजारहरु बाहिर निकालेर आजका दिन पूजा गर्ने चलन छ । यसकारण पनि आजका दिनलाई हलि तिहार भनिएको हो ।
कृषि कर्ममा सहयात्रा गर्ने जीवहरु गाई, गोरु लगायतको पनि आज पूजा गरिन्छ, उहिले उहिले त आजको दिन गाईको गोडा मुनीबाट छिर्ने चलन पनि थियो भन्ने लोकउक्तिमा पाइन्छ । गोवरधन पूजा भोली परेका हुनाले गाइगोरु पूजा भोली पनि गरिन्छ ।
आजको दिनको अर्को ब्यापक रौन्क हो , देउसी । हिजो भैलेहरुको भाका अनि आज देउँसेहरुको भाका । वलिराजाले पठाएका भनेर मानिने टोलछिमेकका पुरुषहरुको यो सांगीतिक दस्ता जस्लाई देउसे भनिन्छ अनि यिनीहरुले गाउने अनि प्रस्तुत गर्ने सांगीतिक कोसेली, जस्लाई देउसी भनिन्छ ।
देउसीमा एकजना भट्याउने ब्यक्ति हुन्छन्, सामान्यतया भाका, स्वर अनि छन्दमा यि भट्याउने ब्यक्ति जानकार हुन जरुरी छ । केही देउसीका सर्वप्रिय भाकाहरु वाहेक धेरै अन्य पक्तिंहरु परिस्थितीपरक हुन सक्छन्, ।
दुवोमौलाए जस्तै मौलाइमा रहुन जस्ता आशिषहरु साँच्चीकै समय सान्दर्भीक छन् । वास्तवमै हामी सबैलाई देउसेले दिएको आशिष लागोस्, सदभाव वढोस् । आजको दिन रिसराग सबै भुलेर छरछिमेकको घरमा देउसी खेल्न जाने र सदभाव वढाउने चलन छ । देउसीवाट उठेको रकमले कुनै सामाजिक कार्य गर्ने या वाँढेर लिने या वनभोज जाने पुरानो रिती नेपाली समाजमा पुस्तौ पुस्ताले दोहोर्याइरहेको छ ।
आज गाईगोरु पूजा, नेवारी समूदायमा म्हपूजा, हलि तिहार